ज्यान मारा विरगंजका अस्पतालको लापरवाहीले एक महिलाको मुत्यु-मर्नुको कारण कोरोना तर मुत्यु पछि रिपोर्ट नेगेटिभ ! ( हेर्नुहोस भिडियो सहित )! - Birgunj Sanjalज्यान मारा विरगंजका अस्पतालको लापरवाहीले एक महिलाको मुत्यु-मर्नुको कारण कोरोना तर मुत्यु पछि रिपोर्ट नेगेटिभ ! ( हेर्नुहोस भिडियो सहित )! - Birgunj Sanjalज्यान मारा विरगंजका अस्पतालको लापरवाहीले एक महिलाको मुत्यु-मर्नुको कारण कोरोना तर मुत्यु पछि रिपोर्ट नेगेटिभ ! ( हेर्नुहोस भिडियो सहित )! - Birgunj Sanjal
ज्यान मारा विरगंजका अस्पतालको लापरवाहीले एक महिलाको मुत्यु-मर्नुको कारण कोरोना तर मुत्यु पछि रिपोर्ट नेगेटिभ ! ( हेर्नुहोस भिडियो सहित )!
२९ भाद्र २०७७, सोमबार २०:४२
विरगंंज । जिया लाल | पर्सामा ४३ औँ व्यक्तिको लापरवाहिले मृत्यु, मृत्युको कारण कोरोना तर मर्नुअघिकाे रिपोर्ट नगेटिभ भएको थियो । किरण देवि कर्ण (शिक्षिका) नेपाल राष्ट्रिय विद्यापिठ स्कुल, श्रीपुर उहाँ भदौँ १२ गते नारायणी अस्थाई कोभिड अस्पताल गण्डकमा भर्ना हुनु भएको थियो ।
छातिमा पानी जमेकाले स्वास प्रश्वास लिन समस्या भएको थियो । भर्ना हुनुपुर्व उहाँमा कोरोना संक्रमण थिएन् । भदौँ २२ गते उहाँ कोरोना संक्रमित भएको नारायणी अस्पतालका प्रवक्ता समेत रहनु भएका डा. अतुलेश चौरसियाले जानकारी गराउनु भएको छ । उपचारका लागी भर्ना भएका उहाँ १२ देखी २२ गतेको विचमा १० दिनको अवधिमा छातिमा जमेको पानी निकालिएन् ।
जबकी कुनै ठुलो कारण नै हैन् छातिको पानी निकाल्न समान्य चिकित्सकको एसिस्टेन्टले समेत गर्न सक्छन् । एक चिकित्सकले भने, छातिको पानी निकालेर, एक्सरे गर्दा, र हेमोग्लोविन कम भएकाले त्यस्ता केहि उपचारहरु गरेको भए भिडियोमा बोले अनुसार आत्मविश्वास बलियो भएका वहाँको लापरवाहि बाहेक मृत्यु हुने कारण देख्दीन् ।
विरगंजमा उपचाररत कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु
२२ गते जब पिसिआर पोजेटिभ आयो त्यसपछि पनि उहाँको छातिबाट पानी झिक्न सक्थ्यो नेपाल सरकारको थ्रि स्टार होटलको सेवा सुविधा लिएर झण्डै ३ लाख तलब भक्ता खाएर मान्छे मार्ने देउताहरु कोरोना नगेटिभ आएकालाई फोटो खिचाउने बाहेक केहि गर्न सक्थे । तर कोहि गरेनन् उहाँको मृत्यु भयो । र दाहसंस्कार पनि गरिसकिएको छ ।
मृत्युको अघिल्लो साझ वहाँको पिसिआर नगेटिभ आईसकेको थियो । चतुरहरुले त्यहिँ हस्पिटलमा भर्ना रहेका उहाँका श्रीमान्, छोरा र बुहारीलाई कोरोना संक्रमणले मृत्यु भएको भनिसकेका रहेछन् । वीरगंजमा लापरवाहिले मृत्यु भएको यो मात्रै घटना हैन् ।